Inona no mitranga eo amin'ny làlana miloko?
Misy zavatra mitranga ao am-pon'ny Vahindanitra Milky Way. Ny lavaka mainty mainty - antsoina hoe Sagittarius A * - izay mipoitra eo afovoan'ny vahindanitra dia matetika mangina, ho an'ny lavaka mainty. Fotoam-bavaka isan-kerinandro amin'ny kintana na gazy sy vovoka izay tafiditra ao amin'ny faritry ny sehatra misy azy. Saingy, tsy manana fiaramanidina matanjaka izy tahaka ny làlambe maintimainty hafa. Fa tsara kosa izany.
Vao haingana dia nandefa "resadresaka" izay hita amin'ny teleskaopy x-ray.
Karazana asa inona no mety hahatonga azy tampoka hifoha ary hanomboka mandefa ny fandefasana entona?
Voamarika amin'ny alalan'ny angon-drakitra ny astronoma dia nanomboka nijery ny antony mety. Ny sagittarius A * dia toa mamokatra ny jiro iray mirefotra kely iray isaky ny folo andro na mihoatra, araka ny fikarakarana maharitra ny fanaraha-maso nataon'ny Chandra X-ray Observatory , Swift , ary XMM-Newton . Avy eo, tampoka tamin'ny 2014, ny lavaka mainty dia nanipika ny hafatra - niteraka famoahana isan'andro.
Ny fanombohana akaiky manomboka Sgr A * Fanimbazimbana
Inona no mety hanelingelina ny lavaka mainty? Ny fisehoan-javatra eo amin'ny ravinala dia niseho taoriana kelin'ny
Manakaiky ny lavaka mainty amin'ny alàlan'ny tetik'ady mistery izay nantsoin'ny astronoma G2. Ireo astronoma dia nihevitra fa G2 dia oram-batravatra nipoitra ary vovoka nanodidina ny afobe mainty mainty. Mety ho loharanon-kafatra ho an'ny famokarana fofona mainty ve izany? Tamin'ny faran'ny taona 2013, dia akaiky ny Sagittarius A *. Ny fomba akaiky dia tsy namafa ny rahona (izay mety ho vinavinaina mety hitranga).
Saingy, ny herin'ny mainty dia namelatra kely ny rahona.
Nisy zava-miafina izany. Raha rahona ny G2, dia azo inoana tokoa fa efa niparitaka kely kely noho ny tsikombakomba mahery vaika niainany. Tsy izany. Ka inona no mety ho G2? Misy astronoma sasantsasany milaza fa mety ho kintana misy kôkôsy mahatsiravina manodidina azy io.
Raha izany no izy, dia mety ho nanala ny sasany amin'ireo rahona vovoka iny ny lavaka mainty, ary rehefa nihaona ilay horonam-barotra mainty, dia mety ho hafanana be izany mba hialana amin'ny x-ray.
Hevitra iray hafa dia tsy misy idiran'ny G2 amin'ny famoahana ny lavaka mainty. Fa kosa, mety hisy fiovana hafa any amin'ny faritra izay miteraka Sagittarius A * hamoahana fery bebe kokoa noho ny mahazatra.
Ny mistery iray manontolo dia manome ny mpahay siansa iray hafa hijerena ny fomba hidirana ao anaty lavaka mainty misy ny galaxy ary inona no mitranga rehefa tonga manakaiky ny fahatsapana ny sagittarius A *.
Ny lavaka mainty dia miely manerana ny vahindanitra, ary misy ireo supermassive ao am-pon'ny pelaka. Tato anatin'ireo taona faramparany, ireo astronoma dia nanamarika fa ny lavaka mainty afovoan-drivotra dia ampahany manan-danja amin'ny evolisiona galaxy, izay manimba ny zava-drehetra avy amin'ny fananganana kintana ho endriky ny vahindanitra sy ny asany.
Ny Sagittarius A * no lavaka mainty manintona akaiky indrindra antsika - dia eo amin'ny 26.000 eo ho eo avy eo amin'ny Masoandro no misy azy. Ny iray akaiky akaiky indrindra dia ao afovoan'ny Andromeda Galaxy , izay lavitry ny 2,5 tapitrisa hazavana taona. Ireo roa ireo dia manome astronoma miaraka amin'ny traikefa an-jatony amin'ny zavatra toy izany ary manampy amin'ny fampivoarana ny fahatakarana ny endriny sy ny fomba fitondrany amin'ny vahindanitra .
Pluto: Inona no Nampianarana Antsika ny Fampahatsiahivana Voalohany?
Ny fomba nanamboarana ny Làlan'olo-maina
Mety ho kintana ve i Jupiter?
Tokony hadisoana ianao momba ny fipoahana gamma-ray?
Ireo kintana 10 akaiky indrindra eto an-tany
Misy ny habaka midadasika mivangongo ao amin'ny Outta Outta mivantana
Galaxies tsy ara-dalàna: Zava-miafina noforonina nanerana an'izao tontolo izao
Fantaro ireo karazana galaksianina samihafa
Ny mpahay siansa no mamantatra ireo tebiteby manjavozavo ao anatin'ny fotoana fohy
Nahoana no marefo ny Merkiora?
Ny rano anaty dia misy tokoa
Ny Ghost izay namaha ny famonoana azy manokana
Monologo vavy miaina avy amin'ny "Cinema Limbo"
Inona avy ireo ankizy Indigo?
Zavatra mahasorena sy mahaliana
Kesha Vs. Dr. Luke: Fanazavana momba ilay adihevitra
Conjugating the Verb Verb Voir
Ny 8 Top Spandau Ballet Mankany amin'ny 80 taona
Peter Green, Blues Guitarista
Ny pigment fahiny - ny loko marevaka
Famaritana sy ohatra fampiasana fanamarinana imperative amin'ny teny anglisy
SAT Scores amin'ny fidirana amin'ny fihaonambe goavana
Nahoana no manana teboka ny mari-pandriana?
SAT Scores amin'ny fidirana ao amin'ny Fihaonambe Pac 12
Ny College ao amin'ny Brockport Photo Tour
Stonehill College GPA, SAT sy ACT Data
Fomba fiasan'ny automatisation manara-penitra (APC): Ahoana no ataon'izy ireo?
Ireo horonan-tsary an-dalamby tsara indrindra
Ny krizy Suez - zava-mitranga manan-danja amin'ny fanonganana an'i Afrika
Inona no nitranga tamin'ny Hetsika Bodoy Aoriana?
Laozi - mpanorina ny Taoism
3 Ny fialan-tsasatra manerantany dia mamela ny fanombantombanana